By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Sunday, 15 Sep 2019 05:54 AM / 0 Comment / 41 views
Waxaa loo baahan yahay dhaqaale joogto ah oo loogu talagalay wax ka qabashada arrimaha bina-aadamnimada si looga hortago inay ka sii darto xaaladda cunayari ee ay halista ugu jiraan malaayiin dad ah oo ku sugan Soomaaliya ayna horay u saameysay dalagg yaraantii ugu xumayd ee dhacda tan iyo sanadkii 2011, ayuu yiri madaxa gargaarka bini’aadanimo ee Qaramada Midoobay, Mark Lowcock, khamiistii.
Mr. Lowcock, uqaabilsanaha Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Arrimaha Bani’aadamnimada iyo Isku-duwidda Gargaarka Degdegga ah, wuxay Soomaaliya ku wada sugnaayeen Madaxa-Ku-xigeenka Bangiga Aduunka ee Ajendaha Horumarinta 2030, Maxmuud Muxuldiin, iyo Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Taageerada Nabadda, Oscar Fernandez-Taranco. Intii lagu gudajiray booqashadan, masuuliyiinta sarsare waxay goob joog ka ahaayeen isku xirnaanshaha udhaxeeya dadaaladda bina-aadamnimada, kuwa dhisidda nabadda iyo dadaallada horumarineed ee dalka. Magaalada Baydhabo, waftigu waxay soo kormeereen mashaariicda ay tabarucaada ay deeq bixiyayaashu maalgaliyeen ee taageerada siiya bulshada gudaha ku barokacay.
Isagoo ka hadlayey shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho, Mr. Lowcock wuxuu yidhi, “In kasta oo tallaabo kasta loo qaaday wax ka qabashada baahiyaha beni aadminimo bilihii la soo dhaafay, hadana waxaa jira baahi sii kordheysa, taa oo u baahan doonta in wax looga qabto maalgelino dheeraad ah, si loo ilaaliyo xaaladd bina-aadamnimo oo abuuranta dhowrka bilood ee soo socda”
Sida ku cad macluumaadkii ugu dambeeyay ee ay soosaartay Hay’adda Cunnada iyo Beeraha laanteeda Falanqeynta Cunnada iyo Nafaqada iyo Shabakadaha Nidaamka Digniinta Hore ee Macluusha, abuurka dalagga ee Soomaaliya ee ugu dambeeyay wuxuu ahaa kii ugu xumaa tan iyo sanadkii 2011.
Hay’adda cunada aduunka ee FAO waxay ku eedeysay xaaladda cunayaraaneed ee Soomaaliya roobabkii Gu’ga oo dib uga dhacay bilihii la filayay ee April ilaa June islamarkaana si xun u saameeyey wax soosaarkii dalagga.
Qorshaha waxqabadka bani’aadamnimo ee sanadkan ee Soomaaliya wuxuu helay 487 milyan oo doolarka maraykanka ah, taas oo ka yar kalabar inta loo baahan yahay maalgelin ahaan si loo gaarsiiyo dadka gargaarka lagu badbaadinayo nolosha ee sanadkaan.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo bulshada samafalku waxay bilaabeen Qorshe looga Falcelinaayo Saameynta Abaarta (DIRP) kaasoo caawiyay ugu yaraan hal milyan oo qof oo cunto la’aan la soo daristay tan iyo bisha Sebtembar.
Lowcock wuxuu yidhi, ” Tirada dadka soomaalida ah ee gaajaysan waxaa ka yartahay hal milyan tiradii aan marka hore filaynay; taasina waxaa sabab u ah jawaab celinta guud ee caalamiga ah ee la sameyyay saddex bilood ka hor markay caddaatay inuu waddanku galayo dhibaatooyin.”
Madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Aduunka ee Ajendaha Horumarinta 2030, Maxmuud Muxuldin ayaa sheegay inay iskaashi la sameyn doonaan mas’uuliyiinta si ay u taageeraan dadaalada dhaqaale ee bulshooyinka maxalliga ah.
Wuxuu intaas ku daray “Sanduuqa Dhismaha Nabadda wuxuu si aad ah diiradda u saari doonaa dhinacyada dib-u-heshiisiinta iyo xoojinta awoodda hay’adaha qaran ee ka-hortagga khilaafaadka iyo maaraynta iyo dhismaha nabadda.”
Ka dib markii waftigu la kulmeen Raiisel Wasaaraha Soomaaliya, Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wasiiro dowladeed, Mudane Mohieldin wuxuu xusey in wadahadalkooda uu salka ku hayey soo celinta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo hay’adaha maaliyadeed ee caalamiga ah, taas oo ah wax awood u leh in ay horseedo waa cusub oo u barya dalka.